Makomboards akawanda uye iyo pamabhanji anotakura zvinhu zvakawanda. Vanowanzobatsira kubatanidza zvigunwe kana kuti kubvumira kona yepamusoro yepamusoro yakaiswa pabhokisi. Kana iwe wakaona zvimwe zvigadzirwa zvakaiswa pane kiyi, kureva, mumufananidzo unogona kuona pane dot, hyphen, uye kusimbisa. Muchirongwa ichi, tichakurukura - Chii icho Alt Gr kiyi, unoishandisa sei, uye kuti unokwanisa sei kana kudzivisa Alt Gr key pamusoro Windows 10 keyboard (kwete US keyboards).
Chii chinonzi Alt Gr key paKikibhodi yangu
ALT GR kana ALT GRAPH kiyi inowanikwa mune imwe khizha yepasi rose iyo inotsigirawo nzvimbo, kureva, tsamba dzakagadzirwa kana mari uye zviratidzo zvakasiyana. Ichi chinhu chinobatsira munhu wose achifunga mumwe achishanda nemutauro umo munhu anoda kushandisa mashizha emagetsi dzimwe nguva.
Kuishandisa iri nyore. Sezvakangoita kumhan'arira kiyi yekudzora yeCtrl + C, unogona kushandisa ALT GR + kiyi iyo inogarawo yakakosha kana tsamba yakanyorwa. Windows inobvumira kutevedzera Alt GR paunodzvanya Ctrl + Alt makiyi pamwechete.
Heino chokwadi chinonakidza pamusoro peAtGr. Yakatangwa pakutanga seyo nzira yekutsvaga zvakananga mitsetse uye mabhedhi muGII. Kunyange zvakadaro ikozvino iko zvino kushandiswa kubudisa mamwe mavara.
Ndingaita sei kana kuti ndabvisa Alt Gr key
Hapana nzira yekudzivisa iyi kiyi. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa. Kunyange zvakadaro, magetsi anowanikwa zvichienderana nezvamunodyara kuti muite neAll Gr key.
1] Kana iwe uine Alt Gr khiye pamakombiyuta yako, unogona kuzvidzivirira kuburikidza nekufambisa chinhu chekutsvaga uye kona yekudzora panguva imwechete. Zvinokwanisika kuti yakagadzirirwa kuti igare iripo; izvi zvinogona kuzvidzivisa.
2] Tinoziva izvozvo Windows inoteedzera kiyi iyi kana iwe ukadzvanya Ctrl + Alt makiyi pamwechete kana kushandisa Kona Alt kiyi. Kana mukato wako ALt Gr key wakamira kushanda, unogona kushandisa kusanganiswa.
3] Kana iwe usingadi Alt Gr kuti ushande zvachose, tinogona kubvisa zvinyorwa zvayo. Izvi zvinogoneka kushandisa Microsoft Keyboard Layout Creator.
Dhawunirodha, gadza uye wozotanga chishandiso wobva wadzvanya paFaira> Load Iripo keyboard. Ita shuwa yekusarudza chaiyo keyboard dhizaini.
Isa katebhokisi pedyo neAll + Ctrl (Alt Gr). Kana uchangobva kuita izvozvi, icharatidza vanhu vose vangaita.
Pano iwe une zvisarudzo zviviri.
Bvisai mifananidzo iyo yamusingadi. Kana iwe usingadi kuti ishande zvachose, bvisa zvose.
Tsiva iwo nehumiro waunoda kubereka.
Kuchenesa kana kushandura, tsvaga pane unhu hwakasiyana. Ichazarura bhokisi rekushandura. Pano unogona kubvisa kana kunyora iwe sarudzo yako yemunhu.
Kana shanduko dzese dzapera, tinya paFaira> Sevha semufananidzo.
Enda kumenu Project> Zvivakwa. Wedzera zita uye tsananguro.
Wobva wadzvanya zvakare paProjekiti> Vaka DLL uye Setup package.
Vhura dhairekitori kwawakasarudza kusevha setup package. Tinya kaviri kuti umise. Wobva waenda kuZvirongwa> Nguva uye Mutauro> Mutauro> tinya pakasarudzika mutauro rongedza> sarudzo> wedzera keyboard> sarudza zita rekhibhodi yatichangobva kugadzira nekuishandisa.
Iye zvino paunoshandisa Right Alt Key kana Alt GR, haichazoiti chero hupi zvayo, kana kuti huchabudisa maitiro awakasarudza.
Alt Gr key isingashandisi nyaya
1] Matambudziko ekukurukura kure
Kana iri kusashanda kune imwe nzvimbo iri kure kana kuzarura hukama hweHyper-V hwarega kushanda kamwe kamwe, saka zvakanakisisa kuvhara ukama huri kure. The Alt Gr inotanga kushanda zvakare. Icho chirwere chinozivikanwa. Sezvimwewo, iwe unogona kushandisa Ctrl kiyi pamwe chete neAll GR + kiyi inoita kuti iite. Zvinoratidzika kuti Remote Desktop Dhepfenyuro inodzima kana kudzivisa kiyi.
2] Tarisai kana imwe purogiramu iri kuishandisa
Zvinogona kuti imwe purogiramu inogona kunge ichinyatsonzwisisa zvimwe zveAppGr zvinyorwa zvitsva sefupfupi. Ratidzai purogiramu yakangobva kuiswa kana yekuvandudza, uye iwe unogona kukwanisa kuigadzirisa. Saizvozvowo, ALT yakarurama inogona kunge yakafanana.
3] Shandisa AutoHotKey
Unogona shandisa AutoHotKey kutevedzera Alt + Ctrl pane Windows 10. Kunyange zvazvo kodzero yeAlT yakakodzera inofanira kushanda, kana isiri iyo script inofanira kukubatsira.
4] Kuchinja keyboard panzvimbo:
Dzimwe nguva kushandura keyboard keyboard kubva kumutauro wezvino kusvika kune dzimwe nyika kunogona kupisa ne keycode. Iwe unogona kunge uchibvisa iyo keyboard uye unotendeuka kuti usagadzire kugadzirisa.
Ndine chokwadi kuti chimwe chezvinhu izvi chichakubatsira kugadzirisa nyaya dze ALT Gr dzaunayo Windows 10. Kazhinji yakavakwa pane zvisiri zveSouthboards, ichi chinhu chinokosha izvo Shanduro zhinji inoshandisa vaparidzi kana vatengi hazvizivi.
Heano mavara ari mu Animal Kuyambuka: New Horizons kusvika zvino!
3 Nzira dzekuremadza Iyo CapsLock Kiyi Mu Windows 10
Nzira Yokugonesa Kana Kuti Dzaira Remote Desktop In Windows 10